ओथेल्लो सिन्ड्रोम के हो | बेजिया
ओथेलो सिन्ड्रोम के हो?
मारिया जोस रोल्डन | 29/04/2021 23:31 | मनोविज्ञान
ओथेलो सिन्ड्रोमले अंग्रेजी लेखक शेक्सपियरको एक नाटकको चरित्रलाई जनाउँदछ। यो चरित्र रोगजनक ईर्ष्याले ग्रसित हो, जसले उनलाई हर समय आफ्नी श्रीमतीको बेवफाईको बारेमा सोच्न लगाउँथ्यो। आशा गरिएको जस्तो हुन सक्छ, यस सिंड्रोमबाट पीडित व्यक्तिले उनीहरूको सम्बन्धलाई असफलतामा बर्बाद पार्छ र दुवै व्यक्तिको बिच सह-अस्तित्व असुरक्षित हुन सक्छ।
यो कुनै पनि जोडीको लागि वास्तविक समस्या हो किनभने सम्बन्ध विषाक्त हुन्छ। अर्को लेखमा हामी यस प्रकारको सिन्ड्रोम र यसले कसरी दम्पतीलाई नकरात्मक तरिकामा असर गर्छ भन्ने बारेमा थप कुरा गर्ने छौं।
1 के कारण ओथेल्लो सिंड्रोम हो?
2 ओथेलो सिन्ड्रोमको लक्षण
के कारण ओथेल्लो सिंड्रोम हो?
यो स्पष्ट छ कि ओथेल्लो सिन्ड्रोमबाट ग्रस्त व्यक्तिसँग मानसिक स्तरमा निश्चित जोखिम छ। थप रूपमा, त्यहाँ कारणहरू वा कारणहरूको एक श्रृंखला छन् जसको लागि तपाईं ईर्ष्याको प्रकारको भोग्नु पर्दछ: कम आत्म-सम्मान, पार्टनरमा ठूलो भावनात्मक निर्भरता र एक प्रिय एक छोडेर एक्लै छोड्ने अत्यधिक डर।
यस प्रकारको ईर्ष्या भएको व्यक्तिले बिभिन्न प्रकारका विकारहरू पनि भोग्न सक्छ जुन जुनूनी बाध्यकारी डिसअर्डर वा केही पागल प्रकार प्रकारको विकार को मामला हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, यो पनि सोचेको छ कि ईर्ष्याले शरीरलाई हानिकारक र हानिकारक पदार्थको अत्यधिक सेवनले रक्सी वा लागुपदार्थको रूप मा हानिकारक हुन सक्छ।
ओथेलो सिन्ड्रोमको लक्षण
हामीले माथि माथि उल्लेख गरिसक्यौं, जो व्यक्ति यस सिन्ड्रोमबाट पीडित हुन्छन् ऊ साथीको रोगवैज्ञानिक र अस्वास्थ्यकर ईर्ष्यालु हो। यस प्रकारको ईर्ष्याका तीन फरक विशेषताहरू हुन्छन्।
कुनै वास्तविक कारण छैन किन यस्तो ईर्ष्या उत्पन्न गर्नुपर्दछ।
पार्टनरको अत्यधिक र अत्यधिक शंका.
प्रतिक्रिया पूर्ण तर्कहीन छ र अर्थहीन
ईर्ष्यालु व्यक्तिको लक्षणको रूपमा, निम्न हाइलाइट गरिनु पर्छ:
तपाईंको पार्टनरको अत्यधिक नियन्त्रण प्रयोग गर्दछ। उसले सोच्छ कि ऊ जहिले पनि अविश्वासी हुन्छ र यसले उसलाई सतर्क गराउँछ।
तपाईं आफ्नो पार्टनरको गोपनीयता र ठाउँको आदर गर्नुहुन्न। तपाइँको साथीले के गरिरहेको छ तपाइँलाई सबै समयमा जान्नु पर्छ। यसले उनीहरूको सामाजिक सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्छ।
अपमान र चिल्ला दिनको उज्यालोमा छन्। यी सबैले शारीरिक वा मानसिक हुन सक्ने हिंसा निम्त्याउँछ।
त्यहाँ सकारात्मक भावनाहरु वा भावनाहरु को लागी कुनै ठाउँ छैन। ईर्ष्यालु व्यक्तिको लागि दिनभर रिसाउनु र रिस पाउनु सामान्य हो। ऊ आफ्नो पार्टनरसँग खुशी छैन, एक निर्भर सम्बन्ध बढी हो।
छोटो, यस प्रकारको सिन्ड्रोमलाई जतिसक्दो चाँडो उपचार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। डाह व्यक्तिलाई एक पेशेवरको सहयोगको आवश्यक पर्दछ, उसलाई यो देखाउनको लागि कि तपाईं अर्को व्यक्तिसँग विषाक्त तरीकामा सम्बन्ध राख्न सक्नुहुन्न। यदि व्यक्ति आफैंलाई उपचार गर्न अनुमति दिदैन वा ईर्ष्याको समस्यालाई हटाउन सक्षम छैन भने, सम्बन्ध असफलतामा डममड हुन्छ। सम्बन्ध दुबै व्यक्तिको पूर्ण सम्मान र विश्वासमा आधारित हुनुपर्दछ। सम्बन्धमा पैथोलॉजिकल ईर्ष्यालाई अनुमति दिन मिल्दैन, किनकि यसले अन्तमा यसको विनाश गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » मनोविज्ञान र जोडी » मनोविज्ञान » ओथेलो सिन्ड्रोम के हो?
के तपाई ब्लान्कोरेक्सियाबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ? सेता दाँत भएको संग जुन जुन
यस वसन्त को लागी hair कपालको मास्क